तार, ट्यूब र केबलको लागि अल्ट्रासोनिक सफाई मोड्युल - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
हेलसिचले प्रदूषण हटाउनका लागि अल्ट्रासोनिक सफाई प्रणालीहरू सिर्जना गर्दछ, जस्तै स्नेहक, तेल, धूल, ग्याँस, साबुन, वा निरन्तर प्रोफाइलबाट स्ट्रिट जस्ता तारहरू, तार, ट्याब्लेट, फ्ल्याट पट्टी वा केबल जस्तै।
यूएससीएम – एक मोडुलर सफ्टवेयर प्रणाली
यूएससीएम सीरीज सफ्टवेयर मोड्युलको रूपमा डिजाइन गरिएको छ। यूएससीएम मोडल प्रत्येक मध्ये प्लग-र-प्ले अपरेसनको लागि आत्म-निहित सफाइ इकाईमा तयार छ। यूएससीएम मोडलहरू विभिन्न लम्बाइ 600 र 2000 मिटरमा उपलब्ध छन्। बहु-चरण सफा वा रिजिङ अपरेसनका लागि, तपाइँ रेखा संग दुई वा बढी यूएससीएम मोड्युल जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सफाई आवश्यकताहरूले यो अत्यधिक अनुकूलन सफ्टवेयरको लम्बाइ र कन्फिगरेसन परिभाषित गर्दछ। यदि तपाइँ भविष्य (डी-बोन्टेन्सिङङ) मा लाइन-गति अपग्रेड योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँ खाली स्लॉटहरू संग एक सफ्ट मोडल खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसकारण तपाई पछि थप ध्वनि प्रमुखहरू थप्न सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं लाइनमा अर्को USCM सफाई मोड्युल थप्न सक्नुहुन्छ, तपाईंलाई यसको आवश्यकता पर्दछ।
अल्ट्रासोनिक तार सफाई सम्पर्क-कम हो, अहिलेसम्म मेकेनिकल सफाई विधि हो। यसले अल्ट्रासोनिक cavitation को उपयोग गर्दछ। यसैले, यो कम आवश्यक छ, कम कठोर वा कुनै रसायनहरू। यसले अल्ट्रासोनिक सफाईलाई पारंपरिक एसिड वा विलायक सफाईको लागि अनुकूलन अनुकूल विकल्प बनाउँछ। केहि क्लाइन्टहरू पानी प्रयोग गर्छन्, जस्तै DI पानी मात्र। यो खाना-ग्रेड वा मेडिकल तारहरूको लागि आदर्श छ। निस्सन्देह, कम कठोर रसायनहरु को प्रयोग पनि कार्यस्थल सुरक्षा मा सुधार गर्दछ।
यूएससीएम मोड्युलहरू धेरै वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको छ। प्रत्येक मोड्युल तीव्र अल्ट्रासोनिक सफाई, तरल निस्पंदन, हीटिंग र पुनरुत्थान र सुखाने को लागि वायु-वाइ पाइन्छ।
हेलसिच USCM सफाई प्रणालीहरूले प्रोफाइल लाइनहरू 200m / min सम्म विभिन्न लाइन गतिमा सजिलैसँग प्रक्रिया गर्न सक्छ। 25 मिटर भन्दा बढीको क्रस-सेन्सरल डायमिटरको लागि र बहु-तार सफाईको लागि, हामीसँग अनुकूलित समाधानहरू छन्। कृपया थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
यो भिडियोले USCM600 र यूएससीएम 1200 लाई दुई समानांतर तारहरूको अल्ट्रासोनिक इन-लाइन सफाईको लागि कन्फिगर गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक तार सफाई प्रणाली USCM600 र USCM1200 अन्तहीन सामग्री, जस्तै तार, केबल, डण्ड र टेप को कुशल र द्रुत सफाईको लागि प्रयोग गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक तार सफाई USCM600 & USCM1200
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुशी हुनेछौं।
कृपया तपाईंको सम्पर्क विवरणहरू तल फारममा राख्नुहोस्। कृपया प्रोफाइल आयाम र सामग्री बारे जानकारी प्रदान गर्नुहोस्, लाइन गति, प्रदूषण, ठाउँ प्रतिबन्ध, सफाई आवश्यकताहरू र सफाई स्टेशन अघि र पछि प्रक्रिया चरण। यसले हामीलाई राम्रो सहयोग गर्न मद्दत गर्नेछ। धन्यवाद!
कुनै पनि सामाग्री को लागि अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग
यूएससीएम सफाई मोड्युलका सबै प्रकारका प्रोफेशनल सामग्रीहरू जस्तै तापर, एल्युमीनियम, स्टेनलेस, पीतल, ग्लास फाइबर, धागो यार्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्य सफाई तरल पदार्थ डी पानी वा तटस्थ डिटर्जेंट, अल्केलिन वा अम्लीय क्लीनर को कम सावधानी संग पानी हो।
टेप वा पट्टी
अन्य सतत प्रोफाइलहरू
तेल वा बोसो
धूल वा ग्यास
तारिङ ड्राइंग प्रक्रियाको लागी
स्टम्पिङ, बनाउनु वा रोलिङ पछि
तार पे-अफ स्टेसनमा अर्को
एनिलिंग गर्नु अघि
कोटिंग गर्नु अघि
वेल्डिङ गर्नु अघि
तार निकाल्नु अघि
पुनः-कोइजिङ स्टेशन अलग गर्नुहोस्
मानक यूएससीएम आकार
प्रणाली अवयवहरू सफा गर्नुहोस्
अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग प्रमुखहरू
सिरेमिक वायर गाइड
सफाई तरल ट्यांक
हट एयर ड्रायर
USCM600 र USCM1200
घुमाउँदै ब्रशहरूसँग USCM600